‘क्रान्तिकारीहरुले चुनौती र सम्भावनाको द्वन्द्वको भीषण बाढीमा हेलिने साहस गर्नैपर्दछ’ – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
ताजा अन्तर्वार्ता : देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाको लडाइँमा लामबद्ध बनौं !
प्रकाशित मिति : २०७६ माघ १४
“सीमा अतिक्रमणको विरोधसहित समग्र राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि यस प्रकारको अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक परेको हो । यस अभियानले भारतीय विस्तारवादसहित साम्राज्यवाद र देशीय दलाल एवम् नोकरशाही पुँजीवाद तथा सामन्तवादका विरुद्ध परिलक्षित नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्ति, जनता र सिङ्गो राष्ट्रको हितमा निश्चय नै महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्ने छ ।”
“विभिन्न देशभक्त, वामपन्थी शक्तिहरुलाई पनि समावेश गरी राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा कार्यगत एकता तथा संयुक्त मोर्चा गरी संयुक्त जन–आन्दोलनको तयारी तथा सञ्चालनका लागि पनि हामीले आवश्यक पहल गरिरहेका छौँ ।”
“क्रान्ति निश्चितरुपमा चुनौती र सम्भावनाहरुको द्वन्द्वका बिचबाट विकसित हुने गर्दछ र हामीले यस द्वन्द्वको भीषण बाढीमा होमिने हेलिने साहस गर्नुपर्दछ ।”
“आफुलाई कम्युनिष्ट भनाउने तत्वहरुको निधारमा कहिल्यै नमेटिने गरी कलङ्कको कालो टिका लाग्ने छ र उनीहरु जनताको नजरमा राष्ट्रघाती तत्वका रुपमा चिनिने छन् ।”
महासचिव ज्यू, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले चार महिने ‘राष्ट्रिय स्वाधीनताको अभियान’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो अभियानको आवश्यकता किन प¥यो ? यस अभियानले नेपालको क्रान्ति, जनता र राष्ट्रलाई के कस्ता फाइदा हुने देख्नुभएको छ ?
हाम्रो पार्टीको गत मंसिर महिनामा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकबाट चार महिने “राष्ट्रिय स्वाधीनताको अभियान” सञ्चालन गर्ने निर्णय लिइएको हो । भारतीय विस्तारवादद्वारा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहित नेपालको भू– भागलाई भारतमा गाभेर नयाँ नक्सा बनाई सार्वजनिक गरिएको स्थितिमा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न विशेष गम्भीर बन्न पुग्यो । यस अवस्थामा सीमा अतिक्रमणको विरोधसहित समग्र राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि यस प्रकारको अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक परेको हो । यस अभियानले भारतीय विस्तारवादसहित साम्राज्यवाद र देशीय दलाल एवम् नोकरशाही पुँजीवाद तथा सामन्तवादका विरुद्ध परिलक्षित नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्ति, जनता र सिङ्गो राष्ट्रको हितमा निश्चय नै महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्ने छ । साथै, यस अभियानमा जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालहरुलाई पनि उठाइने छ ।
यो अभियानलाई कसरी सञ्चालन गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ? यस अभियानमा विभिन्न राष्ट्रवादी तथा देशभक्तहरुको सहभागिता कसरी गराउने सोच्नु भएको छ ?
यो अभियान पाको पहल र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा तथा सम्पूर्ण जनवर्गीय मोर्चाहरुको सहभागितामा मेची–महाकाली एवम् पहाड, हिमाल, मधेस÷तराई सबै क्षेत्रमा देशव्यापीरुपमा सञ्चालित गरिने छ । यस अभियानमा व्यापक रुपमा जनपरिचालन पनि गरिने छ । यसका साथै विभिन्न देशभक्त, वामपन्थी शक्तिहरुलाई पनि समावेश गरी राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा कार्यगत एकता तथा संयुक्त मोर्चा गरी संयुक्त जन–आन्दोलनको तयारी तथा सञ्चालनका लागि पनि हामीले आवश्यक पहल गरिरहेका छौँ ।
क्रान्तिकारी माओवादी, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा लगायत देशभक्त तथा क्रान्तिकारीहरुले राष्ट्रिय स्वाधीनताको आवाज उठाइरहँदा वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारको मौनतालाई कसरी लिनु भएको छ ?
वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकार भारतीय विस्तारवादको दलाली र दलाल एवम् नोकरशाही पुँजीपति तथा सामन्तवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने नव–प्रतिक्रियावादी सरकार हो । यस अर्थमा यस सरकारले सीमा अतिक्रमण र राष्ट्रिय स्वाधीनताको यति गम्भीर विषयमा पनि मौनता साँधिरहेको छ । यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिइरहेका छौँ र हाम्रो आन्दोलन यस प्रकारको दलाल सरकारका विरुद्ध समेत परिलक्षित हुने कुरा पनि स्पष्ट नै छ ।
भारतले आफ्नो नक्सामा गाभेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतको भूमि फिर्ताको पहल गर्नुको सट्टा सरकार अमेरिकी साम्राज्यवादी परियोजना एमसीसी नेपालमा भित्र्याउन कम्मर कसेर लागिपरेको छ । नेपालमा विस्तारवादी र साम्राज्यवादी हस्तक्षेप एकसाथ बढिरहेको अहिलेको परिस्थिति र प्रवृत्तिलाई क्रान्तिकारी माओवादीले कसरी विश्लेषण गरेको छ ?
हो, यतिबेला यो सरकार भारतद्वारा आफ्नो नक्सामा गाभिएको नेपालको अखण्ड भूभागलाई फिर्ता गराउन पहल गर्नुको सट्टा अमेरिकी साम्राज्यवादको रणनीतिक परियोजना अन्तर्गत नेपालमा एमसीसी भित्र्याउन कसरत गरिरहेको छ । यो गम्भीर विडम्वनाको विषय हो । यसरी विस्तारवादी तथा अमेरेकी साम्राज्यवादी दुवै प्रकारका हस्तक्षेप एकैसाथ बढ्दै गएकोमा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने सवालमा हामीले गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेका छौं ।
क्रान्तिकारी माओवादीले एमसीसीको संसदबाट अनुमोदन नगर भन्दै वक्तव्य निकालेर विरोध गरेको छ । एमसीसी संसदबाट पास भई लागू गरिए नेपालमा तत्कालीन र दीर्घकालीन हिसाबले के कस्तो असर पर्ने देख्नुहुन्छ ?
हाम्रो पार्टीले अमेरिकी सैन्य रणनीतिमा आधारित एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गरिनुहुन्न भनेर वक्तव्य दिएको छ । एमसीसीको विरोधमा देशमा विशाल जनमत तयार हुँदै गइरहेको छ । सरकारमा बसेका पार्टीका कतिपय नेता कार्यकर्ताहरुद्वारा पनि एमसीसीको विरोध भइरहेको छ । एमसीसीको यसरी विरोध हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई संसद्बाट जबरजस्ती अनुमोदन गरियो भने त्यसका तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै दृष्टिले गम्भीर परिणाम हुने छन् । सबैभन्दा पहिलो परिणाम आफुलाई कम्युनिष्ट भनाउने तत्वहरुको निधारमा कहिल्यै नमेटिने गरी कलङ्कको कालो टिका लाग्ने छ र उनीहरु जनताको नजरमा राष्ट्रघाती तत्वका रुपमा चिनिने छन् । दोश्रो, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा थप समस्या र जटिलता पैदा हुने छन् । तेश्रो, तत्काल एमसीसी अनुमोदन गरिए पनि भविष्यमा नेपाली जनताले त्यसलाई उल्ट्याइ खारेज गरिदिने छन् । अन्ततः नेपाल ढिलो वा चाँडो वैदेशिक हस्तक्षेप तथा उत्पीडनबाट मुक्त भएरै छाड्ने छ ।
वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध सत्तारुढ नेकपाभित्र समेत भइरहेको विरोध, सडकमा जनस्तरमा भइरहेको प्रतिरोध तथा अन्य राजनीतिक पार्टी स्तरमा समेत भइरहेका आन्दोलनहरुलाई जोडेर वृहत् राष्ट्रिय राजनीतिक आन्दोलन उठान गर्ने विषयमा क्रान्तिकारी माओवादीले के कस्तो पहल गरिरहेको छ ? र त्यसको सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ ?
हो, निश्चय नै हाम्रो पार्टीले बृहत् राष्ट्रिय राजनीतिक आन्दोलनको उठान र विकास गर्ने बारे निकैै गम्भीरताका साथ आवश्यक पहल गरिरहेको छ । अन्य सच्चा देशभक्त पार्टी, शक्ति, र व्यक्तित्वहरु पनि यसबारे गम्भीर बन्दै आएको स्थिति छ । हामीलाई विश्वास छ, नेपालमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्नमा बृहत् राष्ट्रिय राजनीतिक आन्दोलनको उठान हुनेछ र त्यो विकसित हुँदै जाने छ ।
नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिका दुई कार्यभार अर्थात् सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी सङ्घर्षका दृष्टिले क्रान्तिको प्रक्रिया अब कसरी अगाडि बढ्ने देख्नुहुन्छ ? यसका चुनौती र सम्भावनाका बारेमा सङ्क्षिप्तमा प्रष्ट पारिदिनुस् न ?
हो, नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिका सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध परिलक्षित यी दुई कार्यभार यो बेला झनै गम्भीररुपमा हाम्रा सामु उपस्थित भएका छन् । र, यहाँ गम्भीर चुनौती र महान् सम्भावना दुवै छन् । गम्भीर चुनौतीहरुको सामना नगरी महान् सम्भावनाहरुलाई उद्घाटिन गर्न सकिँदैन । क्रान्ति निश्चितरुपमा चुनौती र सम्भावनाहरुको द्वन्द्वका बिचबाट विकसित हुने गर्दछ र हामीले यस द्वन्द्वको भीषण बाढीमा होमिने हेलिने साहस गर्नुपर्दछ । यो बेला सहि नीति निर्माण गर्ने र जनतालाई साथमा लिएर अघि बढ्ने काममा हामी गम्भीर र कृतसङ्कल्पित बन्नु पर्दछ । त्यस स्थितिमा हामी निश्चितरुपमा जटिल प्रकारका चुनौतीहरुको सामना गरी समुज्ज्वल सम्भावनाका द्वारहरुलाई उद्घाटित गर्न समर्थ हुने छौँ ।
प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु एकताबद्ध भएर प्रतिक्रियावादी सत्ता र व्यवस्था सुदृढ पारेर लैजादै गर्दा क्रान्तिकारी शक्तिहरु किन एकताबद्ध हुन सकिरहेका छैनन् ? यसको पछाडि कुन कारणले मुख्य भूमिका खेलिरहेको छ ?
यसो हुनुका पछाडि कारणहरु धेरै छन्, तिमध्ये एउटा प्रमुख कारण क्रान्तिकारी शक्तिहरुभित्र प्रतिक्रियावादको घुसपैठ बढ्दै जानु पनि हो । यसको अर्थ क्रान्तिकारी शक्तिहरुमा अवसरवादको मात्रा बढ्दै जानु पनि हो । यी पनि चुनौती नै हुन् र यिनको पनि सामना गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ ।
वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध चौतर्फीरुपमा जनतामा असन्तोष चुँलीदै गएको देखिन्छ । गैर राजनीतिक व्यक्तिको पछाडि हजारौँ मानिसहरु सडकमा निस्किरहेको अवस्थामा राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा जनता किन सडकमा उत्रिरहेका छैनन् ? कारण के देख्नुहुन्छ ?
यसका पछाडि मुख्यतः तीनओटा कारण छन्, पहिलो कारणको जवाफ माथि गइसकेको छ । दोश्रो कारण, साम्राज्यवादी तथा प्रतिक्रियावादीहरुद्वारा पालित पोषित अनेकौँ गैरसरकारी संस्थाहरु (NGO/INGO) क्रान्तिकारी राजनीतिक पार्टीहरुलाई बदनाम गराउन धेरै कसरत गरिरहेका छन् । तेश्रो कारण, उक्त सबै प्रतिकूलताहरुलाई चिरेरअगाडि बढ्ने काममा क्रान्तिकारी पार्र्टीमा पनि केहि कमी तथा सीमाहरु छन् । यि विषयबारे पनि हामी गम्भीर बन्न जरुरी छ ।
जनताको त्यो असन्तोष, आक्रोशलाईसमेत सङ्गठित गरि आन्दोलन उठान गर्ने विषयमा क्रान्तिकारी माओवादी आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ ? सङ्क्षिप्तमा प्रकाश पारिदिनुस् न ?
जनतामा विद्यमान असन्तोष र आक्रोशलाई सङ्गठित गर्दै अगाडि बढ्ने बारे सर्वप्रथम आप्mनै शक्ति र सङ्गठनलाई मजबुत तुल्याउँदै जान जरुरी हुन्छ । दोश्रो कुरा, जनताको विश्वास जित्न र जनतालाई पनि वर्तमान सरकारको काम छैन, सत्ता र व्यवस्थाकै विरोध र क्रान्तिकारी विकल्प अर्थात् नयाँ जनवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवादतिर जानका लागि सचेत तुल्याउन आवश्यक छ । हाम्रो पार्टीले तात्कालीन र दीर्घकालीन दुवै दृष्टिले गम्भीर प्रयास गर्दै आएको छ र त्यस प्रयासलाई अभैm बढाउन जरुरी छ ।
अन्त्यमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर आम नेपाली, देशभक्त तथा क्रान्तिकारी जनता, पार्टी पङ्क्तिमा के आह्वान गर्न चाहानुहुञ्छ ?
म सबैलाई देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाको लडाइँमा लामबद्ध हुनका लागि विशेष अनुरोध गर्दछु ।
१० माघ २०७६/ मोहन वैद्य‘किरण’– महासचिव, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)